पत्रपत्रिकामा आज के के छन खबर ?
काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित हुने आजका दैनिक पत्रपत्रिकामा बिबिध बिषयलाई समेटेका छन । आजका पत्रपत्रिकामा सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनदेखि बर्डफ्लुले काग मरेकासम्मको समाचार समेटिएका छन । आजको कान्तिपुर दैनिकले २४ घण्टा भोकै सुताएपछि भनियो– अप्रेसन हुन्न, घर जानुस् शिर्षकमा सरकारी चिकित्सकको आन्दोलन सम्बन्धि समाचारलाई प्राथमिकताकासाथ छापेको छ ।
काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित हुने आजका दैनिक पत्रपत्रिकामा बिबिध बिषयलाई समेटेका छन । आजका पत्रपत्रिकामा सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनदेखि बर्डफ्लुले काग मरेकासम्मको समाचार समेटिएका छन ।
आजको कान्तिपुर दैनिकले २४ घण्टा भोकै सुताएपछि भनियो– अप्रेसन हुन्न, घर जानुस् शिर्षकमा सरकारी चिकित्सकको आन्दोलन सम्बन्धि समाचारलाई प्राथमिकताकासाथ छापेको छ । समाचार अनुसार समायोजनमा असहमति जनाउँदै सरकारी चिकित्सकले गरेको आकास्मिक बाहेकका सेवा बहिस्कार आन्दोलनका कारण शुक्रबार देशभर ५० हजारभन्दा बढी बिरामी मर्कामा परे ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा आफूहरुलाई एक तहबाट अर्कोमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था नराखिएकामा सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन ।
यसैगरी बिजयपुर गढी कसको ? शिर्षकमा अर्को समाचार पनि कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा छ । डेढ शताब्दी अघि मणि मुकुन्द सेनको राज्य बिस्तारसँग जोडिएको धरानस्थित ऐतिहासिक स्थल बिजयपुर गढी क्षेत्रमा मनलाग्दी जग्गा हडप्ने प्रकृया र सुकुम्बासी बसोबास बढेको छ । राजनीतिक पहुँच र प्रभावका भरमा जग्गा हडपिँदा बिजयपुर दरबार तथा गढी झण्डै एक बिघा क्षेत्रफलबाट खुम्चिएर केही कठ्ठामा सिमित भएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिकाले बर्डफ्लुले काठमाडौंमा मरे ३५० काग शिर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचार अनुसार काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा बर्डफ्लुको संक्रमणबाट तीन सय ५० काग मरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । बेलायती दूतावास र राहदानी विभाग क्षेत्रमा भटाभट काग मरेपछि गरिएको नमुना परीक्षणमा एच् ५ एन् १ संक्रमण भएको देखिएको विभागले जनाएको छ ।
‘एक हप्तामा डेढ सय काग मरेका छन्, नमुना परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु एच् ५ एन् १ पोजेटिभ देखियो,’ प्रदेश ३ का वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत नारायणबहादुर श्रेष्ठले भने । नेपालमा बर्डफ्लु संक्रमणबाट काग मरेको पहिलोपटक पुष्टि भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
यसैगरी सुरक्षा बिधेयकको बिरोधमा बोल्ने दुई पूर्वजर्नेललाई जंगी अड्डाको चेतावनी पत्र र न्यायाधीश सम्मेलनमा संसदीय सुनुवाई हटाउन माग शिर्षकको समाचार पनि नयाँपत्रिकामा छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टले खुम्चिदै विप्लव शिर्षकको समाचारलाई प्राथमिकताकासाथ छापेको छ । समाचार अनुसार नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको संंगाठनिक संरचना खुम्चिदै गएको छ । दुई वर्षअघि थवाङ महाधिवेशनमा निर्वा्चित केन्द्रीय समितिका झन्डै दुई दर्जन नेता केन्द्रीय समितिमा छैनन् । दर्जन नेता सत्तारुढ नेकपामा छिरिसकेका छन् भने केही निष्कृय छन् ।
महासचिव विप्लव र नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) बीच अन्तरविरोध बड्दो छ । विप्लवका गतिविधिमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि चार नेता प्रहरी हिरासतमा छन् । २०७३ फागुनमा रोल्पामा भएको आठौँ महाधिवेशनले पार्टीको नाम फेरेर नेकपा मात्रै राखेन, ६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पनि बनायो । तर दुई वर्ष नबित्दै केन्द्रीय समितिमा ४१ जनामा आइपुगेको छ ।